Ngwa iji nweta ọtụtụ ihe na Instagram | Akụkọ akụrụngwa
Ingga njem na inwe ike iji ihe igwe eji eji igwe eji eme ihe di elu bu ihe a na-apụghị ichetụ n’echiche n’oge na-adịghị anya, ma taa, ọ bụ eziokwu site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụahịa dị na ahịa na igwe foto dị elu nke ga - enyere anyị aka inweta onyonyo na - enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nwee ntakịrị anyaụfụ ndị anyị were ụfọdụ igwe foto eserese ma ọ bụ ọbụlagodi igwefoto ndị na - emegharị emegharị.
Yana mmelite nke igwefoto nke mobile ngwaọrụ, na ngwa maka smartphones anyị metụtara foto. Otu n'ime ihe kachasị ewu ewu na nke ahụ toro na njedebe na-enweghị atụ Instagram, na ngwa na mkpụrụ obi nke a na-elekọta mmadụ na netwọk na-enye anyị ohere ịkọrọ ihe kachasị amasị anyị na ndị enyi anyị, na-akọghachi ha site na nzacha na nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị.
Agbanyeghị na ngwa a na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ na mgbanwe dị iche iche, anyị na-achọ ihe ọ bụla mgbe niile, dịka ọmụmaatụ, nwee ike ijikwa akaụntụ Instagram abụọ n'otu oge ma ọ bụ gbanwee usoro ahụ na foto ahụ ka ọ ghara ibepụ. N'ihi ya Taa, anyị chọrọ ịnye gị ngwa 7 iji nweta ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ otu n'ime ngwa metụtara foto kasị ewu ewu na ahịa.
Tupu ịmalite ị kwesịrị ịmara na Instagram dị maka nyiwe dị iche iche nke ekwentị, otu n'ime ha bụ gam akporo na iOS yana kwa na desktọọpụ ya, nke ụbọchị ole na ole gara aga ka emelitere yana mmelite na-adọrọ mmasị ma gosipụta onwe ya otu oge na ngwa. otu ihe nwere maka ekwentị.
Ọ bụrụ na ị na-ejikarị Instagram eme ihe mgbe niile, rịba ama ngwa ndị a n'ihi na ị ga-enwe mmasị na ha nke ukwuu.
4 Repost maka Instagram
6 Anwụrụ ọkụ
VSCO Cam Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ngwa nrụzi foto kachasị ewu ewu maka nbudata, n'agbanyeghị na ọ naghị eru ewu ewu na Instagram. Ekele ya, anyị nwere ike idezi foto anyị na nzacha dị iche iche na ụfọdụ ntinye nhọrọ anyị na-agaghị ahụ na ngwa ọ bụla ọzọ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ngwa a iji retouch ihe oyiyi ha tupu bulite ha na Instagram iji nye ha mmetụ dị iche na ngwa ngwa karịa n'ụzọ niile dị mfe.
Otu n'ime nhọrọ ole na ole Instagram anaghị anabata bụ jikwaa akaụntụ abụọ n'otu oge, nke bu nsogbu nye otutu ndi oru, ya buru na ha apughi iji aka nke ha na aka oru ha n’out oge site na ngwa ndi oru. Enwere ike idozi nsogbu a site na ngwa gọọmentị akpọrọ Nkụzi na nke ahụ na-enye ohere ijikwa akụkọ abụọ n’ụzọ dị mfe.
Dịka anyị kwuru, ọ bụghị akwụkwọ gọọmentị ka ị gaghị ahụ ya na ụlọ ahịa ngwa ọ bụla. Otú ọ dị ị nwere ike ibudata n'enweghị nsogbu, maka gam akporo, site na ndị a njikọ.
Dị ka anyị niile mara Instagram na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere bulite vidiyo nke ogologo oge. Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi ihe ga-adịte aka, ị nwere ike ịme klaasị oge ọ bụla ma ọ bụ ihe dị ka vidiyo ogologo oge, mee ngwa ngwa ka ịchọrọ ma ka ị nwee ike igosi ya na ntinye ederede foto.
Maka nke a anyị nwere ike iji ngwa ngwa nke Instagram n'onwe ya, emere ya aha ya bụ Hyperlapse, na na ọ dị mwute ikwu na ugbu a bụ nanị maka iOS ngwaọrụ site na App Store.
Repost maka Instagram
Ọ bụrụ na otu n'ime ndị enyi gị eziga foto gị ma ọ bụ onye ama ama n'etiti ọtụtụ ndị nwere obi ụtọ na Instagram bipụtara onyonyo ịchọrọ ma chọọ ịkesa ya na ndị kọntaktị gị, ị gakwaghị ewe nseta ihuenyo, belata foto ahụ wee laghachi bipụta ya. Usoro a na-agwụ ike nwere ike ịme mkpumkpu karịa maka ngwa ahụ Ntughari maka Instagram, gịnị ka anyị ga-ekwu Ọ bụ ihe kacha nso ịmegharị otu n'ime onyonyo mmadụ bipụtara.
Maka ngwa gam akporo na iOS, ọ kwesịrị ịbụ otu n'ime ngwa ndị ọ bụla onye na-akwado Instagram na onye ọ hụrụ n'anya kwesịrị ịwụnye.
Developer: Red kaktus
Instagram dị mwute ikwu na enyeghị gị nhọrọ ịchekwa ma ọ bụ ibudata ihe oyiyi ọ bụla ọ gosipụtara, ma ọ bụ nke anyị ma ọ bụ kọntaktị ọ bụla, mana ọtụtụ ndị mmepe enweworị ọrụ maka ịmalite ngwa ndị na-enye gị ohere ịchekwa ngwa ngwa ọ bụla oyiyi ma ọ bụ vidiyo ọ bụla nke onye ọrụ ọzọ.
InstaSave Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ngwa ndị dịnụ, mana anyị kpebiri ịnọrọ na nke a n'ihi na enwere ike ibudata ya n'efu, ọ dị na Google Play na Storelọ Ahịa yana yana n'ihi na ọ dị mfe iji.
Maraworị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa onyonyo nke onwe gị ma ọ bụ nke enyi gị, InstaSave nwere ike inyere gị aka.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchịkwa ihe niile na - eme na akaụntụ Instagram gị ma mara ịmaatụ ọtụtụ ndị na - eso ụzọ gị yana ụfọdụ data gbasara ha, yana ịhụ ndị ị na - eso na ndị na - anaghị eso gị, Anwụrụ ọkụ o nwere ike ịbụ zuru okè ngwa n'ihi na ị.
N'ezie, nkwanye anyị bụ ka ị ghara iche ụdị ngwa ndị a n'ihi na n'ikpeazụ ị nwere ike ịkwụsị ịga nzuzu na-ele ọnụ ọgụgụ ọ na-enye gị n'oge niile. Nwee obi ụtọ Intagram ma chefuo maka ọnụ ọgụgụ, nke ha na-ekwu na a ga-agbaji.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ebugo ụdị foto niile na Instagram, gụnyere ndị nwere ama ama ama ama nke ụfọdụ ndị a ma ama na akụkọ ihe mere eme kwuru, ngwa a mere baptizim InstaQuote doro anya maka gị.
Ma ọ bụ ya Ekele maka ngwa a maka gam akporo na iOS anyị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi na ama ama ama ama ama ama ama. Anyị nwekwara ike belata ihe oyiyi ikpeazụ na ọtụtụ nhọrọ ndozi na-atọ ụtọ.
InstaQuote - ederede na foto
Ndị a bụ ezigbo ngwa 7 iji nwee ike ịpị Instagram, ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ nke na-enye gị ohere ịme ihe ndị ọzọ. Anyị egosila gị ngwa anyị ugbu a oge eruola ka ị gwa anyị ụdị ngwa ị na-eji dị ka mgbakwunye na Instagram. Iji mee nke a, dịka ọ dị na mbụ, ịnwere ike iji ohere echekwara maka ikwu okwu ma ọ bụ mee ya site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ugbu a.
Njikere ịpụ ma nwee ọ Instagramụ na Instagram ọbụna karịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ngwa 7 iji nweta ọtụtụ ihe na Instagram